Drug Portal Nepal
औषधी भन्नाले शरीरको व्यवस्थापनलाई परिवर्तन गर्ने अथवा असर पार्ने रासायनिक पदार्थ हो । बैध र अवैध गरी औषधीलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने तथा चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधी वैध औषधी हो भने चुरोट, रक्सी लगायतका पदार्थमा प्रयोग हुने र पसलमा किन्न नपाइने, कानुनले प्रतिवन्ध लगाएका अवैध औषधिहरु लागू औषध हुन् ।
मानिसले विभिन्न कारणले अवैध औषधी अर्थात् लागू औषध प्रयोग गर्ने गर्दछन् । कसैले व्यक्तिगत समस्याबाट टाढा रहन वा दिक्दारी हटाउनका लागि प्रयोग गर्दछन भने कतिले उत्सुकतावश यसबाट राम्रो अनुभव पाउनको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । मानिसले समूहमा आफ्नो फरक पहिचान देखाउन आपूmप्रति आकर्षण बढाउन वा समाजमा आपूm बिद्रोही भएको देखाउन यसको प्रयोग गर्दछन् ।
लागू औषध प्रयोगकर्ताहरु विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् । उनीहरु पुरुष वा महिला, युवा अथवा बृद्ध, धनी वा गरिब, रोजगार भएका वा बेरोजगार, सहरका वा गाउँका कोही पनि हुन सक्छन् । लागू औषधबाट जो सुकै पनि प्रभावित भएको पाइएको छ ।
गाँजा प्रायः जसो चुरोटमा भरेर प्रयोग गरिन्छ र खैरो डल्ला बनाएर बिक्री गरिन्छ । एम्फीटामिन्स र एक्स्टेसी प्रायः जसो टेब्लेटमा बिक्री गरिन्छ र पेय पदार्थमा मिलाई सजिलै निल्ने गर्दछन् । कोकिन, जुन सेतो वा खैरो धुलोका रुपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई नाकको माध्यमबाट तान्ने गरिन्छ र हेरोइनलाई प्रायः जसो सुईको माध्यमबाट प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न प्रकार को लागू औषधको असर शरिरमा फरक फरक प्रकारले हुने गर्दछ । साथै यसका असर मान्छे मान्छेमा पनि फरक हुन सक्दछ । साधारणतयाः गाँजाले शुरुमा चरम आनन्द दिन्छ । रिङ्गटा लागेको, हल्का भएको अनुभवका साथै आरामदायी आनन्दको अनुभव दिने गर्छ । एमफीटामिन्सले शक्ति बढाउने र प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई अबेरसम्म निन्द्रा नलगाउने र धेरै काम गर्ने वा नाच्ने काममा पनि सहयोग गर्दछ । कोकिनले प्रयोगकर्तालाई शुरु शुरुको प्रयोगमा एकदम खुसीको अनुभव दिने र उत्तेजना प्रदान गर्ने गर्दछ । तर यसले प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई भोक लागेको र थाकेको कुरा बिर्साउने गर्दछ । यी असरहरु राम्रा जस्ता लागेता पनि लामो समयसम्म रहनन् । धेरै जसो मानिसहरु निराश र एक्लोपनको अनुभव गर्न थाल्दछन् र पछि बिरामी पनि हुन्छन् । त्यसैगरी लागू औषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु अलमलमा पर्ने, आँखा रातो हुने, धेरै पसिना आउने र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नराख्ने हुनुका साथै लतमा लागेर यसैमा फस्न सक्ने जोखिम पनि त्यति नै हुने गर्दछ ।
लागू औषधको अन्य शारीरिक असर पनि हुने गर्दछन् । उदाहरणको लागि गाँजा भएको चुरोटमा साधारण चुरोटमा भन्दा धेरै रसायन हुने गर्दछ जसले गर्दा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई फोक्सोको क्यान्सर र अन्य श्वासप्रश्वासको रोग हुने सम्भावना बढी हुने गर्दछ । नाकले कोकिन तान्ने मानिसहरुमा नाकको ग्रन्थीमा असर पर्ने समस्या आउन सक्दछ । सुईद्धारा लागू औषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुमा एचआइभी तथा हेपटाइटिस जस्ता विभिन्न सङ्क्रमण हुन सक्दछ । साथै लागू औषध प्रयोगकर्तामा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्या जस्तैः कुपोषण, महिनावारी सम्बन्धी समस्या र मुटु सम्बन्धी रोगहरु देखा पर्न सक्दछन् । अध्ययनहरुले देखाए अनुसार युवा अवस्थामा चुरोट र रक्सी खाने व्यक्तिहरु, नखानेहरु भन्दा अवैध लागू औषध प्रयोग गर्ने जोखिममा रहेका हुन्छन् । तसर्थ यी पदार्थदेखि युवा तथा किशोर किशोरीहरु टाढा रहनु पर्दछ ।
लागू औषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तरार्ष्ट्रिय दिवास सम्बन्धमा मा. गृह मन्त्रीज्यूबाट जारी सन्देश
सुरक्षित जीवन १८ औ अ‍ंक प्रकाशन
Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal - 2076
Narcotics Drug Control Section
Copyright 2017 © Narcotics Drug Control Section. All rights reserved.
C & D By Manaram Technology